Orinasa mifanitsy video Laryngoscope any Shina sy mpamatsy | tana
Teknika mahazatra miaraka amin'ny lelan Macintosh, sary an-tsary mivantana ary sary an-tsary, mahazo ny fahafahan'ny fitaovana roa ao anaty iray, fanampiny sarotra lalan-drivotra lalana tsy voatery. Afaka miatrika ny fidiran'ny làlan-drivotra maro an'isa. Tsy misy fakantsary fogging. Rehefa ampodinao io dia afaka manohitra ny zavona ny fakan-tsary ao anatin'ny 15 segondra. Valiny haingana amin'ny fampidirana.
Ny piraofilina tery tery, ny fahaizan'ny intubation dia nihatsara kokoa ho an'ny fanokafana vava kely. Ny marika manokana sy ny endrika OEM dia ekena.
CE, ISO13485 ary FDA nankatoavina.
Ny fitaovana iray dia afaka manamboatra fidiran-drivotra haingana kokoa, marina, araka izay tratra mba hampihenana ny fahasimbana, ary afaka hiatrika ny lalan-drivotra sarotra amin'ny fomba mahomby. Rehefa miatrika marary mitsikera isika, dia ataontsika izay hahatonga ny asan'ny rafitry ny fitantanana ny làlan-drivotra ho feno kokoa, mety ampiasaina. Ankoatr'izay, azonay noraketina ny tranga noho ny fizarana sy ny tanjon'ny fampianarana.
Avelao hamaly ireo marary intubation emergency ary ampifanaraho amin'ny tontolo iainana anatiny sy ivelany. Fitiavana sy fikolokoloana marefo, fiarovana, azo antoka ary mety amin'ny fitantanana ny lalan-drivotra ho an'ny neonate.
Mora amin'ny fampianarana
Amin'ny alàlan'ny interface data data, mamaly, mandika video ny vokatra
Fampisehoana mpiorina HD ivelany azo zahana
Sud-zoro avo vahaolana
Fakan-tsary 2 megapixels
Zoro saha ≧ 70 degre
Vita ny maodely
Manomboka amin'ny Neonate ka hatramin'ny olon-dehibe, maodely miisa 6 no natao ho an'ny mponina isan-karazany.
Lensa fanoherana ny zavona
Anti- mikraoba mikraoba
Blades azo ariana
Ny famolavolana tokana ampiasaina hialana amin'ny Cross Infection
Blades azo ampiasaina
Vy maharitra 304 maharitra
Famolavolana kilasy tsy misy rano IPX8
Tohano ny famonoana otrikaretina anaty rano
Maivana, azo entina
Fametrahana haingana sy fidirana an-tserasera
Fanesorana haingana kokoa ny lelany na ny lelan'ny Drop
Ny fampisehoana anti-taratra 3 mirefy feno fijerena feno dia manana fahaiza-manao sary an-tsary avo lenta ho an'ny fidiran-tsaina rehetra
Hijery tsara kokoa: Fakan-tsarimihetsika 2.0 Megapixels
Bateria li-ion azo haverina, bokotra iray notifirina ho an'ny firaketana
Blades fanary mora vidy
304 blades azo ampiasaina tsy misy fitsaboana intsony dia azo ampiasaina mihoatra ny in-1000.
Teo aloha: Laryngoscope horonantsary ho an'ny olon-dehibe
Manaraka: Laryngoscope horonantsary Neonate / Pediatric
Laryngoscope amin'ny alàlan'ny horonan-tsary